ကာရန်မဲ့ အတွေးစများ: လတ်တလော ကိုယ့်ရဲ့ အကြိုက်၊ ဆန္ဒ၊ ခံယူချက်၊ ဖြစ်တည်မှု...
အန်တီ ခင်မင်းဇော်က စာရေးစေချင်လို့ Tag တာနဲ့ အားရပါးရ ရေးလိုက်မယ်ဆိုကာမှ မေးခွန်းလေးတွေက လွယ်မယောင်နဲ့ ဖြေရခက်တယ်။ စာမရေးတာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ ကျွန်မလည်း သူများရေးတဲ့စာတွေ ဖတ်ပြီး ခုတော့ စာပြန်ရေးချင်လာပြန်ပေါ့။ :)
ကိုယ့်ရဲ့ နာမည် -------------------------------------- s0wha1 ပေါ့လေ။ (အဲလိုပဲ ပြောရမှာပေါ့နော်) :P
ကိုယ့်ကို သူငယ်ချင်းတွေက ဒီလိုခေါ်တယ် --------- "ET" တဲ့ (သူက)၊ "ကြွက်စုတ်" လို့ အမ ၀မ်းကွဲက ခေါ်တယ်။ သွားတွေက ချွန်နေလို့တဲ့။ (ငယ်ငယ်ကဆို မောင်နှမတွေ ရန်ဖြစ်ရင် အဲဒီသွားတွေနဲ့ ကိုက်လွန်းလို့ လူတိုင်းက ကြောက်ကြတယ်။ ဟိ) အမေကတော့ "နှာရှည်မ" လို့ စိတ်မလိုရင် ခေါ်တတ်ပြီး စိတ်လိုရင် "ဂျပန်မလေး"တဲ့။ ;)) မွေးခါစတုန်းက ရတနာတို့၊ သိဂီင်္တို့ဆိုတဲ့ နာမည်တွေ အမေတို့က ပေးဖူးလို့ ဦးလေး အငယ် (လေးလေးလေး)က "ဂီဂီ" လို့ ခေါ်တယ်။ မောင်နဲ့ညီမက "မလေး"လို့ ခေါ်ပြီး စိတ်မထင်ရင် မထင်သလို ကက်ကက်လန်အောင် ရန်တွေ့တတ်တဲ့အတွက် "နှုတ်သီးကောင်းလျှာပါးနဲ့ စွာတာပါတေးကိုလန်နေတဲ့ စွာတေးမ" လို့ မကြီးက ခေါ်တတ်တယ်။ ကျန်သူငယ်ချင်းတွေကတော့ NickName မရှိတဲ့ ကျွန်မကို နာမည်အရင်းပဲ ခေါ်ကြပါတယ်လေ။
ကိုယ် ဒီမှာ နေတယ် ----------------------------- နွေးထွေးတဲ့ အမေနဲ့ အဖေ့အိမ်။
ကိုယ့်ဆီ ဖုန်းဆက်ချင်ရင် ---------------------- ၉ - ၈ - ၄ ၇ - ၁။ (နံပါတ်တွေကတော့ အမှန်လေးတွေပါကွယ်... ဒါမဲ့ စကားပြောရမှာ ပျင်းတယ်။)
အရောင် ဆိုရင် --------------------------------- အပြာရောင်...။ ဘလော့ဂ် ရောက်လာ မိတ်သဟာတိုင်း ကျွန်မကြိုက်တဲ့ အရောင်ကို သိကြမယ် ထင်ရဲ့။ :))
အ၀တ်အစား ဆိုရင် ----------------------------- အချိန်နဲ့ နေရာအလိုက် ကျွန်မကြိုက်တဲ့ အ၀တ်အစားပုံစံက ပြောင်းသွားတတ်တော့ ကျွန်မ၀တ်တာ အကုန်ကြိုက်ပါတယ်။
အစားအစာ ဆိုရင် --------------------------- ကြေးအိုးဆီချက်၊ ခေါပုတ်၊ မုန့်လက်ဆောင်း၊ ...။ (အသားမျိုးစုံနဲ့ ကျွန်မ စားကောင်းတဲ့ အစားအစာတိုင်း ကြိုက်၏။) ဟီးးး...။
ပစ္စည်း ဆိုရင် ---------------------------------- အ၀တ်အစား၊ အရုပ်၊ ဖိနပ်၊ ကွိစိကွစလေးများ၊ ...။
သီချင်း ဆိုရင် ----------------------------------- သီချင်း အမျိုးအစားမရွေး နားထောင်ကောင်းတဲ့ သီချင်းတိုင်း အားလုံး ကြိုက်။ (မြန်မာ သီချင်းကြီးမှ ခုခေတ် ဟစ်ဟော့သီချင်းထိ...။)
စာရေးဆရာ ------------------------------------- ကျွန်မ ဖတ်ပြီး သဘောကျတဲ့ စာရေးဆရာတိုင်း...။
စာအုပ် ------------------------------------------- ကျွန်မ ဖတ်ပြီး နှစ်သက်တဲ့ စာအုပ်တိုင်း...။
Life style --------------------------------------- လူမချမ်းသာရင် နေပါ။ စိတ်ချမ်းသာစွာ သူနဲ့အတူ နေရရင် တော်ပါပြီ။ (အချစ်တခုတည်းနဲ့ ဘ၀ကြီးက ပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်ပေါ့လေ။ :) )
ကိုယ့်ရဲ့ ၀ါသနာ ------------------------------ စူးစမ်း လေ့လာခြင်း။ (ပြီးရင်တော့ ဘာမှ မတတ်၊ မသိ၊ နားမလည်။ သူကတော့ အဲလို မှတ်ချက်ချတာပဲ။ ဟိ...။)
အလိုချင်ဆုံး လက်ဆောင် --------------------- လစာကောင်းပြီး Electronic Engineering နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုကွယ်။ =))
ကိုယ့်ရဲ့ အချစ်ဆုံးသူက -------------------------- s0wha1 ဆိုတဲ့ me...။ (ချစ်ရတဲ့သူတွေများနေတော့ အဲလိုဖြေလိုက်တာ ၀ိနည်းလွတ်တယ်နော်...:P)
ကိုယ့်ရဲ့ အလေးစားဆုံးသူက --------------------- အဖေ။
ကိုယ့်ရဲ့ အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းက ------------------ သူ။
ကိုယ့်ကို အများဆုံး နားလည်မှုပေးနိုင်သူက ----- ကိုယ်ကိုယ်တိုင်၊ ပြီးတော့ သူ...(လို့ ထင်ရတာပဲ။)
ကိုယ့်ရဲ့ အမုန်းဆုံးသူက ----------------------- မရှိ၊ မည်သူ့ကိုမျှ ဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့မှ ကြာကြာ မမုန်းတတ်သောကြောင့်။
ရင်အခုန်ဆုံး အချိန် -------------------------------- အလုပ်အတွက် အင်တာဗျူး ၀င်ရတဲ့အချိန်။ ဟဲ...။
အကြောက်ဆုံး အချိန် -------------------------- သရဲကား ကြည့်နေချိန်နဲ့ သရဲအကြောင်း နားထောင်နေရချိန်။
အပျော်ဆုံး အချိန် ---------------------------------- သူနဲ့ အတူရှိနေချိန်။
အမှတ်တရနေ့ -------------------------------------- ၁၉၉၈ခုရဲ့ တခုသော ကျောင်းဖွင့်ရက် မနက်ခင်း၊ နှစ်တနှစ်ရဲ့ ဇူလိုင် ၁၇၊ ၂၀.၀၈.၀၇၊ ၀၉.၀၄.၀၈။
ဆုတောင်းတိုင်းသာ ပြည့်မယ်ဆိုရင် တောင်းမဲ့ဆု --- ဖြစ်ချင်တာတွေ (အမြန်ဆုံး) ဖြစ်ရပါစေ။
အချစ် ဆိုတာ ------------------------------------- အရာအားလုံး ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေလည်း အမုန်းမရှိ အချိန်တိုင်း ပေးဆပ်ချင်နေမှု။ (မကြာ မကြာ စကားများ၊ ရန်ဖြစ်နေရပြီး သူမရှိရင်လည်း မဖြစ်ဘူး ဆိုတာမျိုးကြီးပေါ့ :D)
အမုန်း ဆိုတာ -------------------------------------- မမုန်းဘူးလို့ မသိပါကွယ်။ (ဒါမဲ့ ပူလောင်မယ်လို့တော့ ထင်ပါတယ်။)
အလွမ်း ဆိုတာ ------------------------------------- တော်တော် ခံစားရခက်တဲ့ ဝေဒနာ။ (ဖြစ်ချင်တိုင်းလည်း မဖြစ်ရတဲ့ဘ၀မှာ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ မလွမ်းချင်ပေါင်။)
သံယောဇဉ် ဆိုတာ ----------------------------------- ဖြတ်မရတဲ့ ကြိုးတမျှင်။
ဘ၀ ဆိုတာ ------------------------------------------ ပြီးပြည့်စုံတယ်လို့ မရှိတဲ့၊ ဘာမှန်းမသိတဲ့ အရာကြီး။
သူငယ်ချင်း ဆိုတာ --------------------------------- လိုအပ်ရင် ကိုယ့်ကို ပိုက်ဆံချေးမယ့်သူပေါ့ကွယ်။ ဟိဟိ...။
ချစ်သူ ဆိုတာ ------------------------------------ ရန်ဖြစ်ဖော် ရန်ဖြစ်ဖက်၊ ရင်ဖွင့်ဖော် ရင်ဖွင့်ဖက်၊ တိုင်ပင်ဖော် တိုင်ပင်ဖက်၊ အားပေးဖော် အားပေးဖက်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဒီလိုထင်တယ် ------------------------ လက်ရှိ အခြေအနေကနေ ခဏခဏ ထွက်ပြေးချင်နေသူ။ (ထွက်ပြေးမိနေသူ။)
ကိုယ့်ရဲ့ လက်ဆွဲဆောင်ပုဒ်က ----------------------- "Face your past without regrets. Handle your present with confidence. And prepare for the future without fear!" ။
အပြောချင်ဆုံး စကားတစ်ခွန်း ----------------------- ဘယ်တော့မှ၊ ဘာအကြောင်းနဲ့မှ နောင်တ မရနဲ့။
ကျွန်မ ပြန်တက်ဂ်မယ့်သူတွေက ------------------- အန်တီ မေငြိမ်း (မအားမှန်း သိသော်လည်း)၊ မောင်လေး ပြည့်စုံ (သူလည်း ဘယ်ပျောက်နေမှန်း မသိ)၊ မောင်လေး မင်းမင်း (စာမရေးတာ ကြာနေပြီ)၊ ငယ်မ၊ ညီမလေး လင်းလက်ကြယ်စင်၊ ခုမှ ဘလော့ဂ် စရေးတဲ့ နန်းစုသက်
ရေးပြီးချိန်: 9/05/2008 10:10:00 AM